Mandela oo isbitaal wali ku jira - BBC Somali - Warar
Mandela oo isbitaal wali ku jira
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 9 June, 2013, 10:01 GMT 13:01 SGA
Nelson Mandela ayaa habeenkii labaad ku jira isbitaal ku yaal Pretoria, halkaasoo laga daawaynayo cudur sambabada. Masuuliyiinta ayaa sheegay in Mandela oo sagaashan iyo afar jir ah inuu kaligiis neefsanayo, ayna xaaladiisa tahay mid qatar ah laakiin uu ladan yahay.
Saaxiibkiis Desmond Tutu, ayaa ugu baaqay dadka reer Koonfur Afrika inay u duceeyaan. Madaxweyne Jacob Zuma ayaa sheegay inuu booqan doono Mandela markay dhaqaatiirta u ogolaadaan. Waa markii saddexaad oo Mandela la dhigay isbitaalka lixdii bilood ee ugu danbaysay.